Sylvia Aimée · Novambra 2017 · Global Voices teny Malagasy
Sylvia Aimée · Novambra, 2017
Nanomboka nandika tamin'ny 25 Jona 2011 · 572 Lahatsoratra
Lahatsoratra farany an'i Sylvia Aimée tamin'ny Novambra, 2017
Fanambaràna Hisianà Aterineto Maimaimpoana
Mediam-bahoaka30 Novambra 2017
2005 - Namoaka sosokevitra enina izay tokony harahin'ny fanjakana sy ny orinasa mba ahafahana miantoka aterineto maimaimpoana ny Reporters Without Borders sy ny OSCE (Fikambanana ho an'ny Fandriampahalemana sy ny Fiarahamiasa any Eoropa).
Shina: Fandraketana Ny Tena Anarana Ho An'ny Fandefasana Hafatra Eo Noho Eo
Azia Atsinanana30 Novambra 2017
Nanainga fanontaniana mikasika ny lalàna i DingYong mikasika ireo fitsipika ireo. Notsindriany fa na miorina ao ShenZhen aza ny orinasa QQ, ny mpampiasa azy avy any amin'ny firenena hafa sady toa tsy araka ny lalàna ao amin'ny governemantan'i ShenZhen ihany koa ny fangatahana ireo mombamomba ny tena, toy ny karatra...
Amerika Avaratra29 Novambra 2017
Amin'ny volana aogositra ho avy, raha tsy manambady miozolomana io zazavavy io ("nomena alalàna" hitondra pakistaney *mampitahotra* izy),... toa hahita ny endrika matin-dRamatoa Reny. Raha toa ianao te-hanavotra ain-dreny Bengali iray 40 taona any ho any, mahasarika, malefaka somary mampivarahontsana,... misoratana anarana izao dieny izao.
Afganistana29 Novambra 2017
Tohizan'ny BBC ny fanadihadiana mikasika ireo fitarainana nataon'ny blaogera Afgana iray, Sohrab Kabuli, hoe nisy nandrahona azy avy ao anatin'ny rafitra informatikan'ny BBC.
Global Voices sy Ireo Sakafo Hariva Erantany
Mediam-bahoaka24 Novambra 2017
Na mahafinaritra aza ny mihaona virtoaly amin'ireo olona manerantany amin'ny alalan'ny blaogin'izy ireo, mbola tsara lavitra noho izany ny tena mihaona mivantana.
Ahoana No Fomba Hanivanan'i Iràna Ny Aterineto?
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana24 Novambra 2017
Tsy Microsoft irery ihany no orinasa amerikana izay manana teknolojia manohana ny fibahanana ny fahalalahana miteny, sady tsy i Shina irery koa no firenena itrangan'izany.
Olana Miozolomana ve io?
Olana Miozolomana ve io, ka ireo miozolomana ihany no tsy maintsy mamaha ny olana, sa olana eo amin'izao tontolo izao ka izao tontolo izao no tomponandraikitra mitady ny vahaolana?
Pikantsary Mikasika Ny Sivana
Azia Atsinanana20 Novambra 2017
Araka izany, voafetra fotsiny ho an'ny lohatenin'ny blaogy ny fanivanan'ny MSN Space China. Toa tsy voasivana ireo lohateninà famoahan-dahatsoratra manokan'ny tsirairay ary toa tsy voasivana ny ao anatin'ny vataben'ny lahatsoratra
Ireo Ejiptiana Blaogera Ao Amin'ny Onjampeo
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana16 Novambra 2017
arotra ny mitady ny marimaritra misy eo amin'ny fanoratana bilaogy mikasika ny fiainana sy ny blaogy mikasika ireo tranga - ary raha ny marina dia ny firotsahana an-tsehatra manao azy ireny